Uganda oo si kulul ugu jawaabtay Eedaymo uga yimid Qaramada Midoobay, kuna goodisay inay ciidamadeeda kala baxayso Wadamo ay Soomaaliya ku jirto
Uganda oo si kulul ugu jawaabtay Eedaymo uga yimid Qaramada Midoobay, kuna goodisay inay ciidamadeeda kala baxayso Wadamo ay Soomaaliya ku jirto.
Kadib markii eedeymo ay Qaramada Midoobay u jeedisay Dowldda Uganda, iyadoo Uganda lagu eedeeyay inay taageerto jabahada M23 ee ka dagaalanta bariga DR Congo ayay Uganda ku hanjabtay inay dib u eegis ku sameynayso howgallada nabad ilaaliyeed ee ay ka waddo dalal ka tirsan qaaradda Afrika.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay inay baaritaano ay samaysay ay ku ogaatay eedeymaha ay u soo jeedisay Uganda, waxayna Qaramada Midoobay sheegtay in dalalka Uganda iyo Ruwanda ay taageeraan jabhadda ka dagaalanta DR Congo.
Uganada ayaa eedeymaha loo soo jeediyay uga jawaabtay si caro leh, iyadoo Uganda sheegtay inay dib u eegayaan Howlgalada ay ka wadaan dalal ay Soomaaliya ay ka mid tahay.
"Dowladda Uganda waxay dib u eegi kartaa howgallada ay ka waddo Soomaaliya, halkaas oo ay naga joogaan ciidamada ugu badan ee ka socda Midowga Afrika" ayuu yiri Asuman Kiyingi oo ah wasiir u dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Uganda.
Dalalka Uganda iyo Ruwanda ayaa sidoo kale lagu eedeeyay inay hubeeyaan Jabhadda M23, dagaaladaasi oo sababay inay ka barakacaan guryahooda ilaa 500,000 oo qof, kuwaasi oo ka cararay DR Congo.
"Waxay eedeynta Qaramada Midoobay sumacad xumo ku keentay dadka Uganda, waxaana eedeyntaan ay keeni kartaa inaan howgallada nabad ilaaliyeed ee Qaaradda Afrika, gaar ahaan Soomaaliya aan dib u eegno" ayuu yiri wasiir u dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Uganda oo la hadlaayay Idaacadda y BBC-da.
Dhanka kale Ciidamada Dowladda Uganda ayaa ka howgalaan dalalka Soomaaliya iyo dalka Afrikada dhexe, halkaasoo ay u joogaan sidii ay qayb uga qaadan lahaayeen nabad ka dhalata dalakaasi, loona joojin lahaa dagaalada ka socda wadamadaasi.